Torohevitra momba ny fahasalamana hosoratana alohan'ny fialan-tsasatra any Maroc
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Torohevitra momba ny fahasalamana hosoratana alohan'ny fialan-tsasatra any Maroc
Eny ary, raha efa nameno ny kitaponao ianao ary namandrika ny sidinao nankany Maraoka ary vonona handany fotoana kalitao any amin'ity firenena mahafinaritra ity ianao, dia miato mandritra ny fotoana fohy. Hanao ny Fialan-tsasatra any Maroc manokana sy tsy hay hadinoina dia mila mandinika torohevitra vitsivitsy momba ny fahasalamana ianao satria raha marary ianao mandritra ny dia dia tsy ho afaka mankafy na inona na inona ianao. Noho izany, alohan'ny hitsangatsanganana amin'ny fiaramanidina mankany Maraoka dia alao antoka fa hanaraka ireo torohevitra ara-pahasalamana naroson'ny Memphistours ireo.
Makà fiantohana amin'ny dia
Alohan'ny handehananao dia mila mahazo antoka ianao fa ny fiantoham-piantohana ankapobeny momba ny teboka fiantohana dia ihany koa. Satria amin'ny ankabeazan'ny toe-javatra, ny fiantohana dia tsy handrakotra ny faritra fiantohana amin'ny dia. Noho izany, raha tsy misy fiantohana fitsangantsanganana ny fiantoham-piaranao, dia tokony hahazo izany alohan'ny hitsidihanao an'i Maraoka. Raha mikasa ny hiroboka amin'ireo hetsika mampientanentana toy ny bisikileta na trekking any Maraoka ianao dia mila fiantohana amin'ny dia. Mandritra ny fahazoana fiantohana fitsangantsanganana dia alao antoka fa ny politikan'ny fiantoham-piaranao dia manana klazy hamindra toerana vonjy maika.
Tsidiho ny mpitsabo anao
Tena ilaina ny mitsidika ny dokotera alohan'ny handehananao any Maraoka satria misy aretina tropikaly sasany azonao mora raisina raha tsy mahazo vaksiny mialoha. Ho an'ny fitsangatsanganana any Maraoka, ny vaksinina natolotra dia misy ny hépatite A sy B, MMR, typhoid, rabies (indrindra raha ho eny ivelany ianao) sy ny tetanosy. Na izany aza, tsy ho voan'ny tazomoka mora any Maroc ianao, amin'izay azonao atao ny misoroka vaksinin'ny tazomoka. Ankoatr'ireo vaksiny ireo dia tokony ho azonao antoka ny manangona fanafody tena ilaina ao amin'ny kitanao fanampiana voalohany.
Ny fahazarana mihinana anao
Amin'ny fotoam-pialan-tsasatra any Maroc dia mila mitandrina manokana amin'ny fahazarana misakafo ianao. Tsy afaka mividy voankazo na zavatra hafa mihinana amin'ny mpivarotra amoron-dàlana ianao satria ny hafanan'ny Marôka dia mety hanimba ny sakafony ary mety hisy fiantraikany ratsy amin'ny rafitra fandevonan-kanina ireo mpandeha satria tsy zatra mihinana karazan-tsakafo toy izany. Ankoatr'izay, aza mihinana zava-manta raha tsy hosasana sy voahazo ary masaka tsara. Tokony hiezaka hihinana amin'ny atmosfera madio ao amin'ny hotely misy anao na trano fisakafoanana tsara rehetra any Maroc fotsiny ianao. Mihinàna sakafo vao voaomana sy mafana vao mafana rehefa mandeha.
Tsy tokony hisotro rano fisotro mivantana ianao any Maraoka satria tsy madio sy madio any ny rano eo an-toerana. Tokony hisotro rano ianao aorian'ny fizotran'ny fanadiovana fotsiny. Any amin'ireo tanàn-dehibe dia azonao atao ny mahita mora foana ilay tavoahangy misy marika rano izay madio sy tsara ho an'ny mpandeha. Noho izany, tokony hitazona rano anaty tavoahangy miaraka aminao foana ianao mandritra ny dia eto amin'ity tanàna tsara tarehy ity.
Betsaka ny rano sy morontsiraka isan-karazany izay misy ao Maroc, saingy tsy tokony hilomano any amin'ireo riandrano ao Morocco ireo ianao raha tsy misy famotopotorana marina. Izany dia satria ao amin'ny vatan'ny rano any Maroc dia misy bakteria voan'ny virus antsoina hoe schistosomiasis parasite ankehitriny. Izy io dia iray amin'ireo katsentsitra mampidi-doza indrindra izay mety miteraka aretina maro amin'ny vatanao ary mety hanimba ny taova ao anatiny aza.
Afaka milomano ao anaty rano masira any Maraoka ianao satria tsy hipetraka ao anaty rano masira ireo katsentsitra ireo, fa tokony hofaritana tsara ny haavon'ny loto ao anaty rano alohan'ny milomano ao. Ankoatr'izay, aza mividy entana hazan-dranomasina eny amoron-dalana, indrindra ny sifotra.
Ny fiarovana ankapobeny
Maraoka ao amin'ny firenena milamina izay tsy iharan'ny fanafihana fampihorohoroana firy. Saingy, ho fiarovana anao amin'ny ankapobeny, tokony hialanao amin'ny toerana misy ifandraisany amin'ny governemanta amerikana na ny kolontsaina tandrefana any Maraoka satria ireo toerana ireo no tena lasibatra. Tsy tokony hitsidika klioba, casino na trano fisakafoanana misy alikaola any Maraoka ianao.
Noho izany, raha te hanao ny fotoam-pialan-tsasatra any Maroc ianao dia mila azonao antoka fa hanaraka ny torolàlana momba ny fahasalamana rehetra izay niresaka momba ity lahatsoratra ity ianao. Raha tsy mahita ny toro-hevitra momba ny fahasalamana noresahina ianao dia tsy ho afaka hankafy ny fialan-tsasatrao araka ny kasainao hatao. Noho izany, raha tsy te-hiafara any amin'ny efitrano fandraisam-bahiny hopitaly ianao aorian'ny fialan-tsasatrao dia araho ny torolàlana momba ny fahasalamana ary milamina.